3 Mazano ekuvandudza Zvakaitika mu-Chitoro ... uye Revenue | Martech Zone
This weekend ndakaenda kunotenga ku new Kroger Musika. Padivi katsamba… dai Kroger akangofunga kuisa mari mukuvapo kwavo kwepamhepo kwaive kwakakosha sekuvapo kwavo kwekutengesa. Ini ndinosiya. Musika mutsva wakavakwa mhiri kwemugwagwa kubva kune yapfuura Kroger. Nhanho imwe mukati uye iwe unogona kuona nei.
Bhekari nechingwa chitsva cheArtisan, dhiri ine yakatsaurwa gourmet chizi counter, Starbucks, kaunda keSushi, uye imwe-yekumira kunotenga kwevana, matoyi, yekurara, yekugezera, jewelers, uye kicheni. Yaitova necafeteria uye chikamu chehoridhe. Ichi chitoro chikuru chine zvese. Kana kuti zvinodaro here?
Pandanga ndichifamba nepachitoro ndichitsvaga yekuwachira sipo, ndakaona kumwe kushanda. Imwe kiyi ndeyekuti chikamu chakanangana pamberi pekutarisa chakangoita sechitoro mukati mechitoro. Unoda kutora imwe mukaka uye miriwo mitsva (kunyangwe yakakura munharaunda)? Unogona kupinda nekubuda mumaminetsi mashoma. Rwendo rwangu rwakatora maawa akati wandei pandakatarisa kona yega yega yechitoro.
Kuti ndiwane sipo yekuwachisa, ndaifanira kutarisa kumusoro pachikwangwani chaindinongedzera kumugwagwa 48. Ndakadzokera munzira iya yechitoro, ndokutora Tide yangu, ndokufamba sedenderedzwa… paive nezvinhu zvese zvine hutano, zvitsva. ndizvo. Ndakatora Starbucks, ndakazorora, ndokuzoongorora.
Chiitiko chemuchitoro chaive nezvikamu zviviri kubva muzvitatu zve nzira yekuve wakakwana. Iyi infographic kubva kuMoki yakavakirwa paForrester Ramangwana reDhijitari Chitoro. Inonongedza iyo nzira kune matatu makiyi aripo kune yakasarudzika emazuva ano muchitoro chiitiko:
Zviripo - Ini ndaifunga kuti zvikamu zvitsva zvaive zvakakwana. Kune Wal-mart kune rimwe divi remharadzano, asi nekuve girosari nezvimwe zvinobatsira, iyo Kroger yakapa sarudzo yakasarudzika yemhuri. Ichokwadi chekuti ini ndaigona kutora kenduru nyowani yeribhoni, bourbon yepamusoro, kana pani yekutsvaira inoratidza kuti Kroger anonzwisisa vatengi vayo.
Inoshanda - Iwo mwaka emwaka uye nyore zvikamu zvakanaka. Ini ndainzvenga kuenda kuKroger yekare kunotora kirimu kirimu nekuti zvaida rwendo rwekuyenda kuchitoro chese kutenga kamwe chete. Ini ndaizoenda kuchitoro chemuno chiri nyore panzvimbo. Iye zvino ndinogona kuenda kuKroger uye ndinotora mimwe miriwo mitsva, zvakare!
munhu zvichienderana - Apa ndipo pane mukana wekuti Kroger awedzere ruzivo rwemuchitoro. Dai ivo vangori nepedyo-munda kutaurirana kwakadzika mune yavo nhare application, pamwe mamwe ari-muchitoro mabheoni, uye mamwe masimba ekuratidzira panzvimbo pematafura ekare-echikoro matafura, ndingadai ndisinganyanyo kunetseka neese real estate yekuvhara. Uye, kana yangu Plus Kadhi yakanyoreswa, vanogona kutondiitira zvimwe zvandinowana ndichifamba muchitoro.
Chinhu chikuru ndechekuti chitoro hachidi kugadziriswazve - chitoro chikuru. Ini pachangu, ndingafarire kuona zvigaro zvakagadzikana uye masofa akasaswa mukati mechitoro. Kunyanya vanhu kutandara - pavanonyanya kufunga nezvavanoda kutenga. Ndakamira paStarbucks ndichibva ndaenda ndokutora zvimwe gumi nembiri kana zvimwe zvinhu.
Kroger anogona kubatsirwa nekukwiridzira tekinoroji inoshandiswa mukati mayo. Pandakaongorora, mukadzi uya aive kumashure kwangu akashamisika kuti ndaive nekarori kadiki kaizere mari. Haana kuona iyo Mahi, Woodford Reserve, uye Sandalwood ribhoni kenduru randakatenga. Ini pamwe ndakashandisa zvakapetwa zvakapetwa kaviri zvandaitarisira.
Ini ndinogona kungofungidzira zvandaizoshandisa dai rwendo rwangu rwaive munhu zvichienderana!
Tags: muchitoromune-chitoro ruzivokrogerkroger pamusikachitorochitoro chiitikochitoro